पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले १० हजार महिलाको निःशुल्क पाठेघरको जांच गर्ने – Sajha Online Khabar
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले १० हजार महिलाको निःशुल्क पाठेघरको जांच गर्ने
सन्तोष न्यौपाने÷झापा : झापाको बिर्तामोडमा रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले १० हजार महिलाको निःशुल्क पाठेघर सम्बन्धी रोगको परीक्षण गर्ने जनाएको छ । अस्पताल प्रशासनले आगामी भाद्र ६ गतेदेखि भाद्र ११ गते सम्म स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी महिलामा हुने क्यान्सर रोगको विशेष जाँच गर्ने तयारी थालेको जनाएको हो ।
अस्पतालले आज सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो चरणमा एक हजार महिलाको परीक्षण गरिने जनाएको हो । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.निराजन प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो चरणमा एक हजार महिलाको पाठेघर सम्बन्धी रोगको निशूल्क परीक्षणसँगै १ लाखबराबरको उपचार खर्च व्यहोर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
महिलाको पाठेघरमा क्यान्सर रोगको जोखिम अत्यधिक भएको भन्दै सिइओ डा.प्रसाईले स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका महिलाको चेतना बढाउन पनि अस्पतालले निशूल्क परीक्षण गर्न लागेको बताए ।
साथै उनले महिलाहरुकालागि निःशुल्क ओपिडी सेवा पनि प्रदान गरिने जानकारी दिए । साथै उनले अन्य जाँचहरुमा २५ प्रतिशत छुट दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले अस्पतालले १ हजार गरिब परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराउने योजना पनि अघि सारेको जानकारी दिए ।
नेपालमा नै सुविधासम्पन्न मानिएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि व्यवस्थापनले भर्खरै नेपालका चर्चित सर्जिकल अंकोलोजोष्टि डा. मुक्ति देवकोटा र रिकन्ट्रक्टीभ क्यान्सर सर्जन डा. बजरंगकुमार शाहलाई भित्रियाइएको पनि अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. वीरेन्द्रकुमार यादवले बर्सेनि ३० देखि ४० हजार क्यान्सरका बिरामी बढिरहेको जानकारी दिए । उनले अधिकांश महिलामा पाठेघर र स्तन क्यान्सर बढी भएको बताए । उनले केहि अस्पतालहरुले बिना हचुवाको भरमा बिरामीको उपचार गर्ने गरेको समेत बताए ।
उनले केही अस्पतालले बिना सिटी स्क्यान नै क्यान्सरको अप्रेसन गरिरहेको सुनाउँदै क्यान्सरको उपचार क्यान्सरकै लागि भनेर खोलिएको हस्पिटलमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अस्पतालले यसअघि ३ सय जनाको स्वास्थ्य बिमा गरिएको जानकारी दिए । अधिकृत गिरीका अनुसार पहिलोपटक अस्पतालले अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट छनोट गरिएका ५० जना विपन्नलाई सेवा दिइंदै छ ।